Bixi Kharajka kujira Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Bixinta Lacag Bixinta ee ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
Talaabooyinka Aad U Baahan Tahay Inaad Hubiso Inaad Bixiso Xaashida Xaanshida Si Deg Deg Ah
Si aad u bixiso kharashka ku baxa tusmada buugaagta ee internetka, waxaad u baahan doontaa kormeeraha qoraalka ama lataliyaha. Haddii aadan mid haysan oo aad raadineyso inaad hesho kormeeraha qoraalka, maqaalkani wuxuu kaa caawinayaa inaad go'aan ka gaarto mid. Waxa ugu muhiimsani waa inaad haysato kormeeraha buugaagta oo halkaas kuula joogaya kuna hanuunin doona hawsha, wuxuuna kaa caawinayaa wixii su'aalo ah ee soo kordha
Mid ka mid ah waxa ugu weyn ee aad u baahan tahay inaad sameyso ka hor intaadan bilaabin ayaa ah inaad qaadatid imtixaannada lagama maarmaanka u ah qorista si aad hortiinna u haysatid markasta oo aad rabto. Qaar ka mid ah kormeerayaasha buugaagta ayaa ku siin doona fursad aad ku tijaabiso xafiiskooda, laakiin waxaad weli u baahan kartaa inaad tan sameyso haddii aadan hubin inay kula qabsan karaan iyo in kale.
Waa inaad had iyo jeer la hadashaa kormeerahaaga daabacaadda kahor intaadan aqbalin wax lacag bixin ah oo ku saabsan qalinjabinta. Hubso inuu asaga ama ayada ay ogyihiin duruufahaaga, waxa ay tahay inaad bixinayso, iyo goorta aad bixinaysid. Uma baahnid inaad ku dhammaato bixinta laba jeer hal shaqo.
Kahor intaadan bilaabin howsha, hubi inaad ka warqabto waqtiga kama dambaysta ah ee gudbinta qoraalka. Tan waxaa lagu sheegi karaa tilmaamaha ama waxaad sidoo kale wici kartaa la-taliyaha kulliyadda oo si toos ah u weydiin kartaa. Waqtiga kama dambaysta ah waa muhiim maxaa yeelay waxay ku siinaysaa waqti aad ku sameyso cilmi baaris, diyaarin, iyo uruurinta waraaqahaaga. Sidoo kale, waqtigaaga ugu dambeeya wuxuu ku saleysan yahay nooca warqadda aad rabto inaad qorto waxaana laga yaabaa inay waxyar ka soo daahdo sidii aad markii hore u maleyn jirtay.
Marka xigta, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad haysato dhammaan qalabka aad ugu baahan tahay warqaddaada. Waxaa jira ilo kala duwan oo kala duwan oo loogu talagalay warqaddaada, laakiin waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad kulmin karto dhammaantood oo aad si habboon u abaabuli karto. Ha ku bilaabin qorista oo keliya, hubi inaad si taxaddar leh dib ugu eegto waraaqahaaga oo aad hubiso inaad fahantay wax kasta oo aad akhrinaysid. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad heysato warqad si wanaagsan loo farsameeyay oo dhib kugu noqon mayso inaad dhammayso.
Tallaabo kale oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso ayaa ah inaad hubiso inaad haysato dhammaan dukumiintiyada aad u baahan tahay ka hor intaadan bilaabin qorista waraaqaha. Tan waxaa ka mid ah qoraalkaaga, tixraacyadaada, bayaanka qoraalka, cutubyada tusaalaha ah, iyo qoraalada kale ee loo baahan yahay. Hubso inaad gacanta ku hayso dhammaan waxyaalahan oo aad diyaar u tahay inaad tagto.
Ka dib markaad dhammeysato howlahan, waxaa la joogaa waqtigii la hubin lahaa inaad dhammaan howlahaaga abaabushay. Si loo hubiyo inaad wax walba ku haysato miiskaaga kahor intaadan bilaabin qorista waraaqaha, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso inaad miiskaaga ku haysato abaabule iyo buug. Halkani waa meesha aad ku keydin doonto dhammaan xogtaada ku saabsan shaqadaada si aad si fudud ugu hesho markii aad u baahato inaad tixraacdo. Waxaad sidoo kale ubaahantahay inaad calaamadeyso feylashaada markii aad socoto, si aadan iskudhaafin dukumiintiyadaada oo aadan iloobin meesha aad wax dhigato.
Ugu dambeyntiina, waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad haysato qof halkaas jooga oo aad kula hadasho mar walba inta aad qoreyso warqaddaada. Kormeeraha daabacaadda wanaagsan wuxuu sameyn karaa dhammaan farqiga u dhexeeya qoritaanka qoraalkaaga si dhakhso leh oo wax ku ool ah iyo haysashada dukumiinti aad ku faraxsan tahay.
Xusuusnow in qaybta ugu dambeysa ee halxiraalaha ay noqon doonto inuu aado dugsi qalin jabiya, si aad u hesho shahaado heer sare ah oo ku saabsan xiisahaaga. Tani waxay ku siin doontaa fursado dheeri ah oo aad ku heli karto buug-qofeed aad u qoran. Tani waa wax aad ku faani karto isla markaana u muujin doonta dhagaystayaashaada inaad qaadatay waqti iyo dadaal muhiim u ah dhammaystirka shahaadadaada.
Sidoo kale waa muhiim inaad hubiso inaadan geesaha gooyn. In kasta oo aad rabto inaad raacdo tallaabo kasta oo geeddi-socodkan ah, weli waxaad u baahan tahay inaad wax walba akhrisato oo aad isku daydo oo aad aragto sida aad dareemayso. markaad dhammeysid warqadda.
Waxa ugu muhiimsan ee la xasuusto marka la qorayo buuga qalin jebinta waa inaad raacdaa dareenkaaga oo aad hubisaa inaad haysato wax kasta oo aad u baahan tahay ka hor intaadan bilaabin qorista. In kasta oo aad dareemi karto inaad taqaanid wax kasta oo u baahan in la qabto, waxaa jiri kara waxyaabo aad illowdo ama ay tahay inaad sameyso oo aadan fileynin. Hubso inaad raacdo dareenkaaga mindhicirka oo fiiro gaar ah u yeelo. Marwalba sax ma noqon karto laakiin wali waad wax ka baran kartaa oo waad qaadan kartaa waxaad baratay waxaadna ku dabaqi kartaa tallaabada xigta ee hawsha.